BAIKAL EM-1 - SOOSAARKA DALAGGA
Isla sannadkaas, saynisyahanka Soofiyeeti ee P.A. Shabeel, sahaminta ciidda bacriminta ee Baikal-noolaha, oo ku salaysan maadadeeda, waxay abuurtay daroogada "Baikal M-1". Wuxuu ka sara mariyey tartankiisa bariga ah ee dhinacyada badan.
Ma taqaanaa?Mid ka mid ah kuwa ugu horreeya sidaDiyaargarowga waxaa la diyaariyay 1896. Saldhigeedu wuxuu ahaa bakteeriyada noodhada, taas oo u muuqata in lagu xakameeyo nitrogen.
Taariikhda farsamada EM
Midawga Soofiyeetiga, tan iyo 20-kii qarnigii la soo dhaafay, cilmi-baaris joogto ah ayaa lagu sameeyey jeermiskaas iyo isticmaalkooda wax-ku-oolka ah ee dhinacyada kala duwan ee nolosha, maaha oo kaliya qaddarinta. Wax soo saarka dadweynuhu wuxuu bilaabmay kaliya 90sii dambe. Midawga Soofiyeetiga, nidaam iyo nidaam lagu helayo wax-soo-saarka wanaagsan waa la soo saaray, laakiin hoos u dhigista ciidda ee xoojintaas ayaa ahaa dhibaato.
Later bilaabay inuu soo saaro daawooyinka la midka ah, laakiin leh qaybo dhaqameed kala duwan. Tani waxay sabab u tahay aagagga cimilada ee kala duwan, qaababka ciidda iyo heerka dhicitaanka. Laakiin Baikal EM-1 ayaa weli ah hogaamiyaha suuqa bacriminta.
Sida loo dabaqo bacriminta "Baikal EM -1", waxaan tixgelineynaa xiga.
Faa'iidooyinka farsamada EM
Diyaarinta "Baikal EM -1" waxay noqotey "nadaafad nololeed" badi degaannada beeraleyda. Waxaa loo adeegsadaa in ay saturate iyo soo nooleeyo ciidda, si loo kordhiyo dhalidda ee dhirta, si loo kobciyo qashinka noolaha.
Muuqaal muuqda oo tiknoolaji ah ayaa ah in aanay wax dhibaato ah u lahayn isticmaalka deegaanka. Diyaarinta "Baikal EM-1" waa mid dhaqaale ahaan aad u qaali ah.
Muujinta tiknoolajiyada EM marka loo isticmaalo soosaarka miraha waa in ay, sababtoo ah aalado dib loo habeeyay, si fiican u soo celiyo bacriminta ciidda waxayna u suurtagelisaa in ay koraan dalag isku mid ah dhowr xilli oo isku meel ah. Daawooyinka shimbirta ee faa'iido leh oo qayb ka ah daroogada, abuuro ciid dabacsan oo biqilka, ubax iyo bacriminta dhirtu si aad ah u dedejiso.
Isticmaalka daroogada noocan oo kale ah waxay kordhisaa tirada nafaqooyinka iyo qulqulka geedka, waxay ilaalisaa kobcinta sunta waxyeelada leh waxayna ka ilaalisaa dhirta cudurada kala duwan.
Isticmaalka EM-diyaargarowga ma saameyneyso tayada iyo faa'iidada wax soo saarka beeraha, taas oo aan lumin tayadeeda inta lagu jiro xilliga jiilaalka ee kaydinta. Muddada lagu talinayo isticmaalka daroogada EM waa laga bilaabo bilawga guga ilaa dayrta goor dambe.
Daroogada EM waxay muujisay natiijooyin aad u wanaagsan oo ku saabsan beeraha xoolaha iyo digaaga, kor u qaadista miisaanka, dhalidda caanaha. Tayada iyo tirada nafaqooyinka ee hilibka iyo ukunta ayaa si weyn u kordhiya isticmaalka joogtada ah ee farsamada noocan oo kale ah. Caadi ahaan xayawaanka mindhicirka ee xayawaanka, daawooyinka daroogada oo ka hortagaya bilawga cudur kasta adoo kordhiya difaacida xayawaanka.
Daroogadaas waxaa loo isticmaalaa xayawaanka xoolaha:
kor u qaadista wax soo saarka caanaha, waxsoosaarka ukunta iyo tayada fur
yaree dhimashada xoolaha iyo shimbiraha;
kordhinta awooda taranka xoolaha iyo shimbiraha;
ka hortagga cudurka;
helitaanka alaab tayo sare leh iyo badeeco jawi bey'adeed.
hagaajinta dheef-shiidka cuntada.
Daawooyinka noocan oo kale ahi waxay wax ku ool u yihiin ururrada aan fiicnayn ee beeraha, waxaa suurtogal ah in ay u adeegsadaan ilaalinta qashinka.
Em-diyaarinta waa lama huraan ma aha oo kaliya beerta iyo beerta, laakiin sidoo kale guri dabaq ah. Qolalka fadhiga iyo qolalka korontada, isticmaal 1: 1000 xal si loo baabi'iyo urta aan fiicnayn ee ka soo baxa karintiisa. Markaad guriga ka baxdid, ku buufin xalka daawada ee EM, hawadu waxay burburin doontaa boodhka, urta sigaarka sigaarka iyo urta aan fiicneyn ee xayawaanka.
Haddii aad bilowday inaad urisid nacasta iyo alaabada maqaarku waxay daboolaan caaryada, iyaga daaweeya xalka EM, iyo urta way baabi'i doontaa, kalana wuu yaraan doonaa. Xadhkaha dharka leh waxaa si joogto ah loo buufin karaa xalkan, waxaadna ilaawi doontaa urta aan fiicneyn, caaryada iyo cayayaanka ee mararka qaarkood u muuqda.
Akariinkaagu wuxuu joogi doonaa nadiif ah oo cusub muddo dheer, waxaad u baahan tahay inaad ku darto 1 tbsp. qaaddo halkii litir oo biyo ah, biyaha ayaa nadiifin doona wakhti dheer.
Kushiinka waa meel ay bakteeriya iyo jeermisyo si joogto ah u noolaadaan. Daadi EM EM 1: 100 adigoo xakameynaya jardiinada, fanka, qaboojiyaha, dejiyaha, saxanka, waxaadna hubsan kartaa in cuntadaadu ay nadiif tahay oo caafimaad qabto.
In musqul la leh xalkan aad wax walba qaban kartid. Waxa kale oo suurtagal ah in 10 ml oo EM ah lagu shubo taangiyada maalin kasta - tani waxay kaa caawinaysaa in la tirtiro urta, wasakhda, iyo tuubada godka laga yaabo inay yaraato.
Maxaa ku jira qeyb ka mid ah Baikal EM-1
Diyaarinta "Baikal EM-1" waxay ku jirtaa kooxda ka hortagga jeermiska. "Baikal EM-1" waa daroogo xoog leh, oo lagu bixiyo nooc ka mid ah dareeraha, oo ay ku jiraan tiro badan oo ah sheybaarka faa'iido leh: sawir-sidaha bakteeriya, taas oo soo saartaa waxyaabaha waxtarka leh ee ka soo baxa salalka rootida iyadoo la isticmaalayo kuleylka ciidda iyo qoraxda; bakteeriyada lactic-ga ee xaddidaysa faafidda jeermisyada malignantiga ah, iyada oo saameeyneysa burburinta xayawaanka iyo lignins; khamiir - kicinayaan biqilka dhirta iyo xasilinta deegaanka.
Sida loo diyaariyo xalalka shaqada ee Baikal EM-1
Xalka ugu fudud iyo kan ugu caansan "Baikal EM -1" waa xalka aqueous, kaas oo sidoo kale loo yaqaan xal EM. Fiirinta xalkan waxay ku xiran tahay ujeedada isticmaalka.
Haddii aad u baahan tahay xal la mid ah waraabinta dhirta iyo ciidda, isticmaal qayb ka mid ah daroogada ilaa 1000 qaybood oo biyo ah. Mararka qaar feejignaanta ayaa kordha, waxay dhammaan ku xiran tahay xaaladda dhaqanka. Haddii aad rabto in aad isticmaasho xalka biyo warshad gudaha ah, ama xaddiga ciidda ayaa xaddidan, xalka 1: 100 waa la diyaariyey.
Ma taqaanaa? Dariska "Baikal EM-1" waxaa lagu iibiyaa weelasha 50 ml.
Si aad u diyaarisid xalka, waxaad u baahan tahay biyo gogol biyo ah ama biyo la kariyey + 20 ... + 35 ° C. Haddii aad u baahan tahay inaad hesho 10 litir oo EM-xal ah, (1: 1000), ka dibna hal baaldi waxaad ku ridaysaa hal qaaddo (10 ml) oo ah Baikal EM-1 diyaargarowga diyaarinta iyo hal qaaddo oo ah malab, ama malmal, malab. Xalka 1: 100, waxaad u baahan tahay 10 qaado oo ah diirada iyo macmacaanka. Dareerka waa in si fiican loo isku qasan yahay. Tilmaamku wuxuu tilmaamayaa in si dhakhso ah loo isticmaali karo ka dib marka la isku qaso, laakiin waxaa fiican in la sugo maalin si loo kordhiyo fiirsashada bakteeriyada faa'iidada leh (laakiin aan ka badneyn 3 maalmood).
Sida loo isticmaalo xalka Baikal EM-1
Si aad u firfircoon oo tayo sare leh, waxaa lagu talinayaa in lagu qoyo abuurka"Baikal EM-1".
Inta badan abuurka, marka laga reebo kuwa haysta filim nafaqo leh, iyo dabocase, waa in lagu qooyay 6-12 saacadood. Ka dib barar, waa in si fiican loo qalajiyaa qorraxda ilaa ay gebi ahaanba kala firdhaan. Iyo in gobolka this waxay ku beeray ciidda. Haddii miraha basasha yihiin (khudradda, ubaxyada), ka dibna waa in lagu qooyay 12-14 saacadood, ka dibna la qalajiyey.
Waa muhiim! Nalalka beerto waa in la qalajiyaa hooska!
Laakiin digriiga baradho, dahlias iyo kuwa kale waa in lagu qooyay laba jeer. Marka ugu horeysa 1-2 saacadood, ka dibna hawada ku dhawaad ​​hal saac, ka dibna dib u qoyn 1-2 ilaa iyo dhul.
Wixii geedo ah, Xalka EM ee 1: 2000 ayaa loo baahan yahay. Ka dib markii caleemaha ugu horeysay u muuqdaan, diyaariyaan xalka iyo buufin dhirta dhallinyarada maalinta saddexaad. Marxaladda hore ee daaweynta noocaan ah waa in la sameeyaa 2-3 maalmood oo kasta. Kadibna waxaad kordhin kartaa dhexdaada illaa 5 maalmood.
Isticmaalka daroogada"Baikal EM-1"waayo, dhirta waxay siinaysaa fursad ay ku koraan noocyo kala duwan oo geedo ah xitaa xaaladaha iftiin yar. Daroogadaan ayaa siinaysa horumarinta dhirta dardargelinta ilaa 20%. Sidoo kale, geedo ma ka badan yihiin, oo aad si ammaan ah u beeri kara ciidda cusub, iyada oo aan ka baqin dhimashada geedka.
Waa muhiim! Ka hor inta aan la beeri abuurka sanduuqyada, waxay lagama maarmaan tahay in lagu daweeyo derbiyadeeda Baikal EM-1 (1: 100).
Wixii waraabka rootiga
Haddii aad rabto in aad isticmaasho xalka EM si loogu waraabiyo waraabka, waxaad u baahan tahay inaad sameyso sida soo socota: Shub hal qaado oo xal ah baaldi biyo ah si aad u sameyso 1: 1000 diirad. Kadib diyaarinta isku dar ah, biyaha dhirta, badanaa hal mar toddobaadkii. Laakiin waad isbeddeli kartaa inta jeer ee aad cabi karto iyadoo ku xidhan xaalada carrada.
Wixii diyaarinta EM compost
Marka hore waxaad u baahan tahay inaad diyaariso saldhiga kombiyuutarkaaga mustaqbalka. DSi arrintan loo sameeyo, waxaad u baahan doontaa nooc kasta oo ka mid ah arimaha organic ee aad haysato: cawska, dusha sare, caws, bur, peat, balka, qashinka hadhuudhka. Dhammaan waxyaalaha maaddooyinkaas waa in si fiican loo burburiyaa.
Waa muhiim! Tayada compost sidoo kale waxay kuxirantahay tirada qaybaha. Inta badan - compost ka badan noqon doonaa.
Isku dhaji milix em-concentration ah ee taangiga - hal koob oo baaldi biyo ah. Si taxadar leh u qoyso salka udiyaariyada horay loo diyaariyay (caleemo, kabo, balka dhadhan) leh xalkan, si fiican u walaaq oo u dabool dhamaan walxahan isku dhafan filimka 3 asbuuc.
Saddex wiig ka dib waxaad ku shubi kartaa compost ceelasha dhoobo.
Waa muhiim! Kombiyuutarka laguma talinayo in laga sameeyo aagga mandiqadda.
Beerta goosashada ka dib
Waxaa jira kala duwanaansho kala duwan ee daaweynta ciidda leh diyaar garowga EM xilliga dayrta.
Habka ugu horeeya waa in la isticmaalo xal EM (tani waxaa lagu qasi karaa biyo sida ku cad cuntooyinka "Baikal EM-1") si aad uga waraabiso ciidda laga bilaabo waraabinta, tuubada biyaha, faleebo.
Habka labaad waa in lagu quudiyo ciidda iyada oo diyaar u ah EM oo qaab shimbireed oo si khaas ah loo daweeyay leh compost.
"Baikal EM-1" wuxuu kordhiyaa korriinka bakteeriyada firfircoon, maadooyinka guga oo soo saara dalag dalagyo cufan leh si koritaanka wanaagsan ee dalagyada kala duwan.